Akanjo Yoga, Akanjo fanatanjahan-tena, Bra manao fanatanjahan-tena ho an'ny vehivavy, akanjo ba malefaka - Arabella
Rafitra fandaminana orinasa
Misy endrika ambany MOQ
Hoodies + akanjo ba
Palitao + Palitao
Akanjo mitondra vohoka
T-Shirt + fiara mifono vy
Vaovao sy fahalalana
TSY MISY DETAILY TSY misy fahombiazana
Manana ny fitaovana mandroso indrindra toy ny eto ambany izahay hiantohana ny fahaizan'ny famokarana sy ny kalitaony.
1. Masinina fanaraha-maso lamba mba hiantohana ny kalitaon'ny fitaovana miditra.
2. Masinina alohan'ny fihenan-damba mba hifehezana ny elastika lamba hahatonga ny haben'ny akanjo ho lasa manara-penitra kokoa.
3.Auto fanapahana milina mba hifehezana isaky ny fanapahana tontonana dia mahazatra amin'ny marin-toerana ary koa hanatsara ny fahombiazany.
4. Auto rafitra mihantona hanatsarana ny fahaizan'ny famokarana.
Manana fizahana fizahana vokatra feno izahay, avy amin'ny fanaraha-maso ara-pitaovana, fanaraha-maso ny tontonana, fanaraha-maso vokatra efa vita vita, fizahana vokatra vita mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra. Mba hifehezana ny kalitao amin'ny sehatra rehetra.
Manana ekipa R&D matanjaka izahay, misy mpamorona, mpamorona lamina, mpanamboatra santionany hanampy anao hampivelatra vokatra vaovao.
Manana ekipa mpivarotra matanjaka izahay hanome serivisy tsara indrindra ho an'ny baiko. Izy ireo dia matihanina ary manam-paharetana amin'ny traikefa manan-karena.
Vehivavy fanatanjahan-tena vehivavy S2020014
Vehivavy fanatanjahan-tena vehivavy S01946
Vehivavy fanatanjahan-tena vehivavy X200AQA001
T-shirt X200245 an'ny vehivavy
Bra manao spaoro vehivavy X200114
Akanjo fohy vehivavy S2020015
Leggings vehivavy SO1947-3
Akanjo fohy X200251 an'ny vehivavy
Akanjo fohy SP20-01-03 an'ny vehivavy
Bra manao spaoro vehivavy SP20-01-02
Vehivavy fanatanjahan-tena manao fanatanjahan-tena vehivavy lava lava lava ...
Vehivavy mihazakazaka tanky ambony akanjo fanatanjahan-tena yoga gym ...
I Arabella dia orinasam-pianakaviana izay ozinina taloha. Tamin'ny 2014, telo tamin'ireo zanaky ny filoham-pirenena no nahatsapa fa afaka manao zavatra misy dikany bebe kokoa amin'ny azy manokana, noho izany dia nanangana Arabella izy ireo hifantoka amin'ny akanjo yoga sy akanjo fanatanjahan-tena.
Miaraka amin'ny volavola Integrity, Unity, ary Innovative, Arabella dia nanangana orinasa mpiorina kely 1000 metatra toradroa mankany amin'ny orinasa iray manana zon'ny import sy ny fanondranana tsy miankina amin'ny 5000 metatra toradroa ankehitriny. Arabella dia nanitrikitrika ny hahita teknolojia vaovao sy lamba avo lenta hanomezana vokatra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa.
Arabella mpamokatra be atao amin'ny volana martsa
Loka Arabella ho an'ny mpiasa manjaitra tsara
Fanombohana tsara amin'ny lohataona Seaon-Cus vaovao ...
Ekipa Arabella mankalaza ny Interna ...
Miverina ny ekipa Arabella
4 # Trano 2-3 / F, No.354, Jiyin Road, Distrikan'i Tong'an, Tanànan'i Xiamen, Faritanin'i Fujian, 361100, Sina
24 ORA ON LINE
Alefaso aminay izao ny fampahalalana